कोरोनाभाइरस महामारीः जोखिम बढ्यो गाउँको
गाैरीफण्टा नाका, धनगढीबाट नेपाल आउँदै । तस्वीर: दिनेश खबर
नेपाल र भारतले बन्दाबन्दी गरेको अघिल्लो साता मात्र स्थलमार्ग भएर भारतबाट आएका साढेँ चारलाख भन्दा बढी नेपालीहरु गाउँ गाउँमा पुगिसकेका छन् ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलन नदिन एक दिनको फरकमा नेपाल र भारत दुवैले पुरै देश बन्दाबन्दी गरे । तर बन्दाबन्दीको अघिल्लो एक सातामा मात्रै सीमा प्रहरी चौकीको तथ्याङ्क अनुसार स्थलमार्ग भएर ४ लाख ६४ हजारको संख्याका नेपालीहरु विना स्वास्थ्य जाँच स्वदेश भित्रिए ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन स्वदेश फर्कनेहरुमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि भारतमा रहँदै आएकाहरु हुन् । प्रदेश–१ को प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार झापाका विभिन्न १२ वटा नाकाबाट १ लाख २८ हजार २२ व्यक्ति सो अवधिमा नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट ७० हजार मानिस भित्रिएका छन् । (हे.इन्फो)
मोरङ्गको रानी (जोगवनी)सहित अन्य साना नाकाबाट ६४ हजार ७७८ जना भित्रिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय (जिप्रका) मोरङ्गले जनाएको छ । त्यस्तै जिप्रका पर्साका अनुसार देशकै मुख्य नाका प्रदेश–२ को वीरगञ्ज भएर सो अवधिमा ५६ हजार व्यक्ति भित्रिएका छन् ।
गड्डाचाैकी नाका कञ्चनपुरबाट नेपाल आउँदै । तस्वीर: दिनेश खबर
पहाडमा जोखिम !
सीमा–नाकाका चौकीमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार भारतमा रोजगारी गरेर फर्कने अधिकांश पहाडी जिल्ला र ग्रामीण भेगका हुन् । सीमामा राखिएको हेल्थ डेस्कमा सामान्य ज्वरो नाप्ने बाहेक अरु केही गरिएको थिएन । जबकि थुप्रै मुुलुकले त्यही अवधिमा स्वदेश भित्रिनेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्न थालिसकेका थिए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरवहादुर पुनका अनुसार भारतबाट फर्केका व्यक्ति यदि कोरोना संक्रमित नै भए पनि उसमा लक्षण तत्काल नदेखिन सक्छ । “संक्रमित व्यक्ति गाउँमा पुगेको भए, त्यसले गाउँभर संक्रमण फैलाउने सम्भावना धेरै हुन्छ,” डा.पुन भन्छन् “भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा नभएको गाउँमा ज्वरो आउने वित्तिकै चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि हुँदैन । कथं यसरी भित्रिनेमा नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमण भए, इटालीको अवस्था हामीले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।”
हुन पनि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएका अधिकांश सूदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरु बझङ्ग, बाजुरा, डोटी, वैतडी डडेलधुराका छन् । जिप्रका कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनिका अनुसार गड्डाचौकी नाकाबाट भित्रिएकाहरु केही दाङ, रोल्पा जिल्लाका हुन् भने बाँकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका छन् ।
डा. पुन भारतको महाराष्ट्र नयाँ कोरोना भाइरसबाट ज्यादा प्रभावित भएको र अहिले स्वदेश फर्कनेमा त्यहाबाट आउने पनि भएकाले गाउँमा स्वास्थ्य जोखिम बढेको बताउँछन् । उनको भनाइमा विमानस्थल भएर आउनेलाई खोज्न सजिलो भए पनि स्थलमार्गबाट भित्रिएकालाई खोज्न सजिलो छैन । यही कारण भर्खरै गाउँमा पुगेकाहरुको लगत संकलन गरेर स्थानीय सरकारले उनीहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने पुन बताउँछन् ।
“प्रविधिको प्रयोग र सानो संख्या भएकाले विमानस्थलबाट आउनेलाई सम्पर्कमा ल्याउन सकिन्छ,” उनी भन्छन् “स्थलमार्गबाट आएका लाखौं मानिसहरु को कहाँबाट आएको भन्ने कुनै अभिलेख नभएकाले गाउँमा पुगेकालाई स्थानीय सरकारले क्वारेन्टिनमा राख्न ढिला गर्नु हुन्न ।”
पछिल्लो एक सातामा कति मानिस गाउँमा भित्रिए भन्ने अभिलेख स्थानीय तहसँग पनि छैन । बाजुराको बुढीनन्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम गिरि बन्दाबन्दी हुनुअघि सबैतिर निर्वाध यातायात चलेकाले कति मानिस गाउँमा आए भन्ने जानकारी नभएको बताउँछन्् । बन्दाबन्दी भएपछि महेन्द्रनगरबाट छोडिएकाहरुको भने अभिलेख रहेको उनको भनाइ छ । गिरीका अनुसार त्यसरी आउनेमा बाजुराका ४६ जना र बुढिनन्दा गाउँपालिकाका १६ जना छन् । उनीहरु सवैलाई जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा क्वारेन्टीनमा राखिएको छ ।
यद्यपी त्यसअघि भारतबाट आएकाहरुको अभिलेख तयार गर्न बुढीनन्दाको हकमा वडा तहमा निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् । “अब संक्रमित आएका रहेछन् भन्ने थाहा भयो भने समस्यै होला जस्तो छ”, अध्यक्ष गिरी भन्छन्, “हामीसँग भएको त्यही ज्वरो नाप्ने यन्त्र हो ।” गिरि भन्छन्
बझङ्गको लेकम गाउँपालिकाका अध्यक्ष परमानन्द जोशी भारतबाट आएकाहरुको लगत संकलनका लागि बुधबारबाट प्रत्येक वार्डमा पाँचजनाका दरले स्वयमसेवक परिचालन गरिएको बताउँछन् ।
डा. पुन भने बाहिरबाट आएकाहरु घरपरिवारसंग घुलमिल भइसकेको भए सवैलाई छुट्टाएर होम क्वारेन्टाइनमा राख्न सुझाव दिन्छन् ।
रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकाले भारतबाट आएका चार जनालाई परिवारसँग अलग राखेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पवित्रा घर्तीमगर भारतबाट आएकाहरुलाई खोज्ने काम भइरहेको बताउँछिन् । “अहिलेसम्म गाउँमा कसैलाई पनि संक्रमणको लक्षण देखिएको छैन”, उनी भन्छिन्, “तर देखियो भने गाह्रो छ, नजिकमा प्रयोगशाला छैन, अन्योलको अवस्था छ ।”
बन्दाबन्दी अघि स्थानीय सरकारहरुले पनि नयाँ कोरोनाभाइरसको संक्रमणको संभावनालाई गम्भीर ढंगबाट नलिएको सम्बद्ध अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । र, यही कारण मानिसहरु विना अभिलेख निर्वाध गाउँ प्रवेश गर्नसके । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाह लकडाउन अघि कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई आफूहरुले गम्भीर ढँगले नलिएकाले कति मानिस गाउँ फर्के त्यसको रेर्कड नराखिएको बताउँछन् । “हामी सम्भव भएसम्म भारतबाट आएका मानिसलाई खोज्दैछौं,” उनी भन्छन् ।